मेस्सीले आँशु पुछेको टिस्यु पेपरको मूल्य ११ करोड! - Dainik Online Dainik Online
मेस्सीले आँशु पुछेको टिस्यु पेपरको मूल्य ११ करोड!
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७८, शनिबार ११ : २२
लियोनल मेस्सीले नचाहँदा–नचाहँदै पनि आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने फुटबल क्लब बार्सिलोना छाड्नु पर्यो। गत अगस्ट ८ मा मेस्सीलाई क्बबले बिदा गरेको थियो। सो क्रममा उनले भावुक हुँदै आफ्नो मनको कुरा खोले र भने,‘मलाई क्लब छाड्न मन छैन तर ला लिगाको नियमले क्लब छाड्न बाध्य बनायो।’ सो क्रममा उनी रोइरहेका थिए।
वास्तवमा मेस्सी र बार्साबीचको सम्झौता सकिसकेको थियो। बार्सालाई १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण थियो। जसका कारण मेस्सी आफू आधा तलब घटाउँदा पनि बार्सामा बस्न पाएनन्। ला लिगाको नियम अनुसार ऋणमा रहेको क्लबले धेरै तलब दिएर खेलाडी राख्न सक्दैन। यतिबेला मेस्सी पीएसजी गइसकेका छन्।
बार्सा छाड्ने दिन मेस्सी रोइरहेका थिए र उनले जुन टिस्यु पेपरले आँशु पुछेका थिए। यतिबेला त्यसलाई अक्सनमा राखिएको छ। त्यसको सुरुवाती मूल्य १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ११ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी भएको बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार धेरैले उक्त टिस्यु पेपर खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।